रोटरी क्लब अफ कपनको सेवाभाव – newslinesnepal
रोटरी क्लब अफ कपनको सेवाभाव
प्रकाशित मिति : १८ पुष २०७७, शनिबार २१:०५
काठमाडौं ।रोटरी क्लब अफ कपनले बेला बेला आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न सेवा मुलक सामाजिक कार्यक्रम गर्ने गर्छ । यसै अनुसार यश पटक कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं १ स्थित जेष्ठ नागरिक सेवाआश्रममा उपमेयर बिन्दु सिमखडाज्युको विशेष उपस्थितिमा आश्रमा रहेका ६ जना जेष्ठ आमाहरुलाई आवश्यक सामग्री इन्डक्सन चुलो, राइस कुकर, चप्पल, खाद्यान्न लगायतका अति आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गर्यो ।
कार्यक्रममा क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्ट कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, इमिडेट पाष्ट प्रेसिडेन्ट राजु लामा, आश्रमका अध्यक्ष पुष्कर प्याकुरेल, कार्यक्रम संयोजक एवं क्लबका इलेक्ट प्रेसिडेन्ट डा. तेज रोक्का र आडिया इन्टरनेशनलका अध्यक्ष एवं रोटरीयन अमर तिमल्सिनाज्युले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा क्लबका उपाध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल, मेम्बर सुजिता काफ्ले, आश्रमा सचिव गोकर्णमणि पुडासैनीको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसरी आश्रममा आउने वातावरण मिलाउने आश्रम परिवारलाई धन्यवाद दिदैं कार्यक्रम संयोजक एवं क्लबका इलेक्ट प्रेसिडेन्ट डा. तेज रोक्काले खुशी हुँदै फेरि फेरि पनि आउने बताउनु भयो । आश्रमका अध्यक्ष प्याकुरेलले आश्रमको गतिविधि र समस्याका बारे बताउँदै मानव सेवा अनि त्यसमा पनि आमा बुवा जेष्ठ नागरिकको सेवा नै मुख्य धर्म भएको बताउनु भयो। आश्रमा यसरी आएर सामग्री हस्तान्तरण गरेकोमा उपमेयर सिमखडाले विशेष धन्यवाद दिदैं आउँदा दिनमा पनि यसरी नै आश्रममा परेको बेला सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । क्लबका अध्यक्ष शिवहरी खनालले आउँदा दिनहरुमा पनि क्लबले सक्दो सहयोग गर्ने र आश्रममा यहाँहरुले गर्नुभएको यो पुन्य कामको लेखाजोखा भगवानले पक्कै गर्नुहुनेछ भन्नु भयो । अन्त्यमा कलबका पदाधिकारी र उपमेयले आश्रमका अध्यक्ष र सचीवलाई सामग्री हस्तान्तरण गरि कार्यक्रमको समापन भयो।